July 2012 - iftineducation.com
Marshaale iftineducation.com – Cabdi Jeylaani Malaaq oo ah fanaan caan ku ah majaajilada ayaa maanta lagu dilay magaalada Muqdisho. Cabdi Jeylaani oo loo yaqaan Marshaale waxaa majaajiladiisa laga sii dayn jiray idaacadaha iyo telefishanada Soomaalida. Laba nin oo aan la garanayn oo bistoolad ku hubaysan ayaa la sheegay inay marxuuumka rasaas ku fureen isaga oo joogay gurigiisa hortiisa. Marxuumka ayaa…
iftineducation.com – Goorta aad tagto Magareeshinka Soomaaliya oo dhisma ahaan degan xarun u dhow Idaacada shabeelle oo kaabiga kuheyso Garoonka muqdisho ayaa ku arkeysaa wax dhaq dhaqaaq shaqo aan kasocon halka shacabka iska cabadayaan blse daqiiqado ayaa dareemeysaa in meesha kasocxorto shaqo xoog leh. Maalmo badan aan isaga daba laabtay Magareeshinka muqdisho ayaa ku arkay waxyaabo siweyn u hareeye magareeshinka…
aadan21 / July 29, 2012
iftineducation.com- Waxaa Maanta Idiin soo gudbin Doona Fanaaniinta ugu caansan Sanadka 2012 oo ay ugu jecelyihiin Dhalinyarada Soomaalida, Iyo magacyadooda. Hadaba qormada ,shaqsiyaadka caanka ah iyo Fanaaninta kaalimaha koowaad ka galay sadankan dhagaysiga Heesahooda ayaan idin soo gudbin doona anaga oo ku bilaabi doona fanaaninta sanadkan loogu jecel yahay. Magacayada Fanaaniinta Loogu jecel yahay Gabdhaha sanadkan. 1- Xaawo Kiin 2-Aamino…
iftineducation.com – Inta badan gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaa muddooyinkaan ka socday dhaq dhaqaaqyo Ciidan iyo dagaallo u dhexeeya Ciidamada Dowladda oo garabka helaaya Ciidamada waddamada deriska iyo dagaalyahanada Al shabaab. Magaalada Kismaayo waa magaalo muhiim ah waxayna gundhig u tahay inta badan hawlgalada socda, iyada oo ay sidaasi tahay Kismaayo waxaa maamula Al shabaab oo ka talinaayey sanadahii…
iftineducation.com – Dowlada Ugandha ayaa qorsheeneysa in Dhawaan Dalka Soomaaliya usoo dirto Ciidamadeeda qaaska ah ee loo yaqaan UPDF-ta si ay ula Dagaalamaan Dagaalyahanada Al-Shabaab ee wali kataliya qeybo kamid ah Koonfurta iyo Bartmaha Soomaaliya. Ciidamadan oo Tiradooda ay gaareyso 3,237 ayaa la sheegay in dhawaanahan uu u socday tababar dheeraad ah ay ugu diyaar garoobayeen sidii ay Soomaaliya ugu…
Soomaalia Oo Ka dhax muuqada Cayaaraha Olombikada Aduunka iftineducation.com – Calankeenna quruxda badan ayaa si weyn uga dhex muuqday furitaanka tartanka Olombikada Aduunka oo ee lagu qabtay magaalada London ayadoo astaanta Calankeenana goobtaasi lagu garaacay. Inkastoo astaanta calan ee dalalka ka qeybgalaya tartanka Olombikada Aduunka goobtaasi lagu garaacay hadana waxaa si gaar ah xusid u mudan iney tani ka dhigantahay…
iftineducation.com – Warar Faah Faahsan ayaa laga helayyaa Oday Xalay lagu dilay xirada IFO xilli uu damcay in koox soo weerartay uu ka difaaco Gabdho uu dhalay, hase ahaatee markii dambe isaga xabado lagu tiriyay. Dilkan ayaa Xalay Fiidki hore ka dhacay Block B-12 ee xirada IFO oo kamid ah xirooyinka ku yaal Dhadhaab, waxaana wararka ay intaasi ku darayaan in…
aadan21 / July 24, 2012
iftineducation.com – Dadka madow ee Afrikaanka ah ayaa waxaa la sheegay inay fariin u direen wadamada reer galbeedka ee caadeystay inay ku tillmaamaan dadka madow kuwo u taagan had iyo jeer dhibaato iyo dagaal, Waxaan ahay Afrikaan ma jecli nabada waxaan mar walba u taaganahay dagaal oo waan ka helaa dagaalka, ma jecli inaan qoslo oo qosolku waa nacasnimo, qorigu waa…
iftineducation.com – Maalmuhu iyo bilooyinkuba waxay soo laablaabtaan-ba waxaa na soo martiyay bishii kheyrka badneyd ee Ramadaan. Waa hubaal inuu yahay marti culus oo aad u qiimo badan. Waa munaasabad cibaadeed oo aad u weyn, oo uu Eebbe (sw) ku dhaafo denbiyada addoomada ay galaan, isla mar ahaantaana uu dhexdeeda ku kordhiyo abaalmarka iyo xasanaadka qofkii isaga muteysta maamuuskaas. Walaalayaal, waa…
iftineducation.com – Tan iyo bishii Maarso ee sanadkii 2011-dii dalka Syria waxaa ka taagneed colaad u dhaxeeysay qaar ka tirsan Shacabka dalka Syria iyo Ciidamada dawlada Syria oo difaacaya Madaxweeynaha dalkaas Mr.Bashar Al Asad. Dagaalka xoogiisa waxa uu ka socon jiray Gobolo iyo Degmooyin aad uga fog Caasimada dalka Syria ee Dimishiiq ama Damascus qofba sida uu u yaqaan, balse iminka…